Qaabku wuxuu buuxiyaa shuruudaha waxqabadka habka
Soosaarka caaryada guud ahaan waxay ku lug leedahay dhowr geeddi -socod sida been -abuurka, goynta, iyo daaweynta kuleylka. Si loo hubiyo tayada wax -soo -saarka caaryada oo la yareeyo kharashaadka wax -soo -saarka, maaddadu waa inay lahaato wax -qabad wanaagsan, farsamayn, adkayn, harde ...
Lix Mabaadi oo Xulashada Caaryada ah
1. Xidho iska -caabbinta Marka bannaanku si caag ah ugu xumaado daloolka caaryada, wuxuu ku qulqulaa oo ku dul -dul -socdaa daloolka dusha sare ee godadka, taasoo keenta khilaaf xoog leh oo u dhexeeya dusha daloolka iyo bannaan, taas oo keenta in caaryadu ku fashilanto duugga dartiis. Sidaa darteed, xirashada dharka ...
Soo -saaraha Gawaarida ee Shiinaha
Aojie waxay leedahay khadka wax soo saarka oo horumarsan iyo nidaamka xakamaynta tayada oo kaamil ah. Shirkaddu waa alaab -qeybiye xirfad leh oo ka samaysan caaryada qaybaha baabuurta ee Shiinaha, waxay qaadataa nidaamka CAD/CAM/CAE heer caalami ah; dhammaan macluumaadka shabakadda maxalliga ah waa la is -weydaarsan karaa oo waa la wadaagi karaa; samee caaryada leh CNC m ...
Saddex Heerarka Qalabka Xulashada Qaab
(1) Iska caabinta daxalka Marka caaryada qaarkood sida caaryada caaga ah ay shaqeynayaan, iyadoo ay ku jirto koloriin, fluorine iyo walxo kale oo ku jira balaastikada, gaasaska daxalka leh ee adag sida hci iyo hf ayaa la xalin doonaa marka la kululeeyo, taas oo dumin doonta dusha ee mol ...
1. Xidho iska -caabbinta Marka bannaanku si caag ah ugu xumaado daloolka caaryada, wuxuu ku qulqulaa oo ku dul -dul -socdaa daloolka dusha sare ee godadka, taasoo keenta khilaaf xoog leh oo u dhexeeya dusha daloolka iyo bannaan, taas oo keenta in caaryadu ku fashilanto duugga dartiis. Sidaa darteed, xirashada ayaa dib ...